အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ရောင်စဉ်များရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ...
29 Responses to “ရောင်စဉ်များရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ...”
ဗဟုသုတ ရှာမှီးသွားပါတယ် မချော ခင်ဗျ :)
မချောကတော့ (ထုံးစံအတိုင်း) ထောင့်စုံနေအောင်ကို လေ့လာ၊ တင်ပြထားတော့ တာပဲဗျာ..၊ အနက်ရောင်ဟာ လျှို့ဝှက်စွာ နေထိုင်လိုတဲ့အခါ ဝတ်ဆင်တယ်လို့ တွေ့လိုက်တော့ ဝ,တဲ့သူတွေ အနက်ရောင်ဝတ်ပြီး optical illusion နဲ့ ကိုယ်ရေစစ် သွားတာ တွေးလိုက်မိသေးတယ်၊ အစိမ်းရောင်ဟာ အေးမြခြင်း၊ လန်းဆန်းခြင်းတွေ အပြင် မြင်ရသူတွေ အတွက် နှစ်သက်စရာလည်း ဖြစ်မယ် ထင်တယ်ဗျ၊ ကျနော်သိတဲ့ အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်တစ်ခုဆိုရင် လူတွေ သိပ်နှစ်သက်ကြတယ်၊း)
အိမ်ပျောက်နေတယ် မချောရေး)
ဟုတ်ကဲ့ ...ကျနော် နေ့ တိုင်း အရောင်တွေ နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ အစ် မ post ကို ဖတ်ရတော့မှ ပဲ ပိုပြီး နားလည်သွားတော့တယ် ...
ရှုပ်ထွေးခြင်းများ၊ အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားလိုသောအခါ ... အသုံးပြု ရတယ်တဲ့ အမှန်ပဲ ဗျာအ ရောင်စပ် ကားတွေ မှုတ်ရင် အဖြူရောင် ကို အ ခြေခံ အရောင် အဖြစ် မှုတ်ပြီမှ လိုချင်တဲ့ အ ရောင်ကို မှုတ်ရပါတယ် .. ဘာကြောင့်လည်းလို့တွေးကြည့်ဘူးပါတယ် .. အခုမှရှင်းတော့တယ် ...
အနီရောင်ဟာ ရှိသမျှသော အရောင်တွေ အားလုံးထဲမှာ နွေးထွေးမှု အရှိဆုံး အရောင်ဖြစ်ပါတယ် ... တဲ့ .. ဒါလည်းမှန်တာပဲ ဆေးမှုတ်ခန်းထဲမှာ တူညီတဲ့ အပူချိန် နဲ့အနီရောင်နဲ့တခြားရောင်ကို မှုတ်ရင် အနီရောင်က ဘာကြောင့် ပိုပြီ ခြောက်တာ မြန်တယ် ..ဆိုတာ အခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ် ...
အပြာရောင်လည်းမှန်တာပဲ .. ကျနော် တို့ ကတော့ အရောင် အိပ့်တယ်လို့ ခေါ်တယ် ...
အစိမ်းရောင် က ...အရောင်တွေထဲမှာ အအေးမြဆုံး၊ ငြိမ်းအေးမှု အရှိဆုံးအရောင်ရယ်လို့လည်း ပြောဆိုကြပါတယ် ...တဲ့
သူလည်းမှန်တယ်ရော ... တော်တော် နဲ့ ကို မခြောက် တက်ဘူး ..
အနက်ရောင်ကတော့ အရောင်တွေအာလုံးထဲမှာ နားလည်ဖို့ အခက်ခဲဆုံး အရောင်လို့ ဆိုကြပါတယ် ... တဲ့ ....အရမ်းမှန်တယ် ဗျာ ... အနက်ရောင် ကားကို မှုတ်ရင် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အခက်တွေ့ ရတယ် .. မှန်းလို့ မရဘူး ဒီတခါ မှုတ်၇င် ဒီလို ဖြစ်တက် လို့ ဆိုပြီ နောက် တခါ မဖြစ်အောင် လုပ် လည်း သူ က နောက် တမျိုး ဖြစ်တယ် .. အနက်ရောင် မှုတ်တဲ့ နေ့ ဆို၇င် ကျနော် စိတ် အညစ်ရဆုံးပဲ ...
ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ... အခုလို အရောင်တွေ ကြောင်း ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက်ပါ ...
တရုတ်တွေ ဘာ့ကြောင့် ကျောက်စိမ်းကြိုက်ကြလဲ ခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ သူတို့ တွေ အမြဲ ကြောက်လန့်နေကြပုံရတယ် နော်အစ်မ။
ကျနော့ ပရီဖား ဖြစ်တဲ့ အရောင်က အနက်နဲ့အစိမ်းနုပါ။
I love red and black colour, sis, even though I'm Thursday born.
စနေနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့ ညီမလေးကတော့ အနီရောင်နဲ့ အနက်ရောင် ခရေစီ ဖြစ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါမမ :):)
ကျေးဇူးပါတီချောရေ.. ညီမတောင်စဉ်းစားနေတာ တီချောကိုအရောင်တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အဓိပ္ဗာယ်တွေကိုရေးပေးဖို့တောင်းဆိုမလို့။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ခုချိန်ထိအဖြူနဲ့ ခရမ်းရောင်ကိုအရမ်းနှစ်သက်တယ်။
မိုက်တယ် ..း) အရောင်ဆို မကြိုက်တဲ့အရောင်လည်းရှိဘူး .. တချိန်တမျိုးကြိုက်နေတာ .. လက်စွပ်လေးထဲမှာ စိန်လက်စွပ်လေးကြိုက်တယ် .. :D ညီမကတော့ အပြာရောင်ကိုယ်စားပြုသော နေ့ :D
အကြိုက်ဆုံးက အဖြူရောင်နဲ့ အနက်ရောင်
အဖြူနဲ့ အနက် တွဲဝတ်ရတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
ဒါကြောင့် ရှင်းလင်းတာကို ကြိုက်သလို ဒေါသလည်းကြီးတယ်... :P
ဒီတစ်လော ကျွန်တော် လေ့လာဖြစ်တာကလည်း အရောင်တွေပဲ..။ (မလေ့လာရင်လည်း မဖြစ်တော့လို့ :D) color psychology တွေအပြင် apply color တွေကိုရောပေါ့...။ မချောရဲ့ အရောင်တွေနဲ့ ရတနာတွေအကြောင်း ဖတ်ရတော့ နောက်ထပ်တွေးဖို့ dimension တစ်ခု ထပ်ရသွားတယ်...။ ကျေးဇူးပဲ မချောရေ..။
တစ်ချိန်ချိန် အချိန်များရရင် color တွေအကြောင်း အတွေးအက်ဆေးရှည်လေးရေးဖို့ စိတ်ကူးတယ်..။ အက်ဆေးရှည်ဆိုမှာတော့ ကြာဦးမယ် ထင်ပါရဲ့လေ...။ again, i like this post, ma chaw. ;)
လှတဲ့အရောင် အကုန်ကြိုက်တယ်။ မချောရဲ့ အရောင်ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အားလုံးကောင်းနေတော့ နောက်နေ့ အပြင်သွားဖို့... ဘယ်အရောင်ရွေးရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဟိ။
ကျွန်တော်က အပြာရောင်ကို ရွေးတယ် မချော...
တကယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အရောင်ပေါ့...
အရောင်တွေ အကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
“ ပျော် ”
ငယ်ငယ်ကတည်းက စွဲလမ်းနှစ်သက်ခဲ့တာ တစ်ခုတည်းရှိတယ်.. အပြာရောင်.... တော်တော့ကို ကြိုက်တယ်... အဖြူဟာ စင်ကြယ်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုလို့ ကြိုက်ပေမယ့် ပျော့လွန်းအားကြီးတယ်... စွန်းထင်းလွယ်တယ်.. အဲဒါကြောင့် အပြာကိုပဲ ပိုနှစ်သက်မိတယ်.. အိပ်ရာခေါင်းအုံးစွပ်.. ခြုံတဲ့စောင်ကအစ အပြာရောင်ကိုပဲ ခြုံမိတယ်... မချောရေ..း)))
မချောရေ.. အရောင်တွေ အကြောင်းကို တော်တော်လေးကို လေ့လာထားပြီး စုံစုံလင်လင်လေးကို ရေးထားတာပဲနော်..။တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရတနာ ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ ဘာရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်..။ အားလုံးကို ကြိုက်တာကိုးး)))။
အရောင်တွေအကြောင်း သေချာ ဖတ်သွားပါတယ် ..
ဖြူပြာကို ကြိုက်တယ် .. မဖြူပြာကို ပြောတာမဟုတ်း)
အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်ကိုလည်း နှစ်သက်တယ် ..း)
အဲ့လွင်ပြင်မှာ ကစားချင်လို့ ..းD ။
တို့ကတော့ လက်ဝတ်ရတနာဆို အဖြူရောင်စိန် ကြိုက်တယ်။ (လက်တွေ့မှာတော့ စိန်တံဆိပ်ခေါက်ဆွဲတောင် စားဖို့အနိုင်နိုင် :)
အ၀တ်အစားဆိုရင်တော့ အဖြူ၊ အနက်၊ Cream Color ဖျော့ဖျော့လေးတွေ ကြိုက်တယ်။ အ၀ါရောင်သည် မနှစ်သက်ဆုံးသောအရောင်ဖြစ်ပါ၏။
သြော်.. ကျန်သေးတယ်...ဟဲ.. အစိမ်းရောင်လေးကိုတော့ ချွင်းချက်နဲ့ ချစ်တယ်တော့...။
ချစ်မကြီးရေ ခရမ်းစွဲ တစ်ဆင်စာလုပ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်
ကိုရင့်ကိုပူဆာလို့မရရင် ချစ်မကြီး စစ်ကူတိုက်ရမှာနော်း)
စိန်သည် အဖြူရောင် ဟုတ်မဟုတ် ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ဘာရယ်မှမဟုတ် အငြင်းပွားခဲ့ကြပါသေးသည်
sky blue ရောင်ကြိုက်ပါသည်။
မမ သမီးအရောင်တွေအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်ရှင်။သမီးကMonday bornဆိုတော့အဖြူရောင်ပေါ့နော်...အားပေးလျက်...:)
ခရမ်းကြိုက်တယ် မမ.. ပန်းရောင်လဲ ကြိုက်တယ် ပန်းရောင်ကရော ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဟင်..ညီမထင်တာက သွက်လက်မှု ကလေးဆန်မှု ..ဟန်မဆောင်အပြစ်ကင်းမှုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်များလား.တစ်နေရာရာမှာ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ မမှတ်မိတော့ဘူး..
အဲ့လိုဆိုရင်တော့ လောလောဆယ် အပြာရောင်လေး လိုချင်တယ် ချောရယ် ...
အဖြူ နဲ့ အနက်ကိုကြိုက်တယ်ဗျ ။
အစိမ်းရောင်မမ ကလည်း မျက်စိအေးပါတယ်လို့း)
အရောင်တိုင်းမှာလည်း သူ့အစွမ်းသတ္တိနဲ့ သူပါပဲလားနော်။ ဗဟုသုတတွေဖတ်သွားတယ် ချောရေ။
တန်ဘိုးရှိတဲ့ ကျောက်သံပတ္တမြား ရောင်စုံလေးတွေကို နှစ်သက်တယ်။
အရောင်ထဲမှာလည်း အနက်နဲ့ အဖြူကိုကြိုက်တယ်..။